January 21, 2020 - khitalinmedia
January 21, 2020 Khitalin Media 0
“ဖေ့ဘုတ်ပေါ်မှာ အရမ်းဟော့နေတဲ့ ပုံလေးရဲ့ ယုံကြည်မှုတွေ ရဲရင့်မှုတွေပါတဲ့ မျက်ရည်ဝိုင်းရတဲ့ အဖြစ်မှန်”
FB ပေါ်မှာ အရမ်းဟော့နေတဲ့ ပုံလေးရဲ့ ယုံကြည်မှုတွေ ရဲရင့်မှုတွေပါတဲ့ မျက်ရည်ဝိုင်းရတဲ့အဖြစ်မှန် မူရင်းဓါတ်ပုံပိုင်ရှင် ကို Thiha Tun ရိုက်တဲ့ပုံလေး အရမ်းကြိုက်လို့ သိမ်းထားတာ ၃ နှစ်လောက်ရှိခဲ့ပြီ…တွ့တွေ့ချင်း လှောင်ပြီး ဟားတိုက်ရယ်မိတယ် …. ဒီလောက် ရူးရသလားပေါ့ …. ပြီးမှကြည့်နေရင်း ကြည့်နေရင်းနဲ့ မရယ်ရက်တော့ပဲ […]
“ရင်ဘတ်ထဲမှာ နင့်နေအောင် ချစ်တတ်တဲ့ မိန်းခလေးတွေရဲ့ လက္ခဏာ (၅) မျိုး”
မိန်းကလေးတွေရဲ့ စိတ်က ခန့်မှန်းရ ခက်ပါတယ်။ အကြောင်း ကတော့ စိတ်ထဲရှိတာက တစ်ခြား၊ အပြုအမူက တခြား ဖြစ်နေတတ်လို့ပါ။ နောက်တခုက မိန်းကလေးတွေဟာ အရမ်း ဂရုစိုက်ခံချင်၊ အရမ်း အချစ်ခံချင်တဲ့ သူတွေပါ။ အဲလို ဂရုစိုက်၊ အချစ် ခံရအောင်လည်း နည်းမျိုးစုံနဲ့ ကြိုးစားတတ် ကြပါတယ် […]
လိမ်မျောသီး ရောငျးတဲ့ အဘတို့ မိသားစုကို ဝမျးသာ မကျြရညျမိုးတှေ ရှာစခေဲ့တဲ့ ရှပေိုးအိမျ ရဲ့ လုပျရပျ
ဒီရက်ပိုင်းမှာ လူမှုကွန်ယက်မှာပွဲဆူနေတာကတော့ စည်ပင်ဝန်ထမ်းတွေရဲ့ အနိုင်ကျင့်ခြင်းခံခဲ့ရတဲ့အဘိုးအိုရဲ့ ဗီဒီယိုဖိုင်လေး ပဲဖြစ်ပြီး လူအများက ဒေါသထွက်ကာ အဘိုးအိုကိုသနားနေကြတာပါ။ ခုအချိန်မှာတော့ ဒီဗီဒီယိုဖိုင်လေးကို တွေ့မြင်ခဲ့တဲ့ ရွှေပိုးအိမ်က အဘိုးအိုဆီကိုသွားရောက်ကာ အကူအညီပေးခဲ့တာပါ။ဒါ့အပြင် ယခုမှာတော့ အဘိုးအိုနေထိုင်ရာ လှိုင်သာယာအထိရွှေပိုးအိမ်ကလိုက်သွားခဲ့ကာ အဘိုးအိုရဲ့သမီးဖြစ်သူဝေဒနာသည်မလေးကိုသွားရောက်တွေ့ဆုံရင်း အလှူုငွေများပေးအပ်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအကြောင်းကို ရွှေ့ပိုးအိမ်က (((ဘဝပေးအခြေအနေကြောင့်ဈေးရောင်းနေကြတဲ့ မိသားစုအတွက်တတ်နိုင်တာလေး သွားကူညီခဲ့တယ် We […]
ကင်ဆာ ဆဲလ် ၉၈% ရာခိုင်နှုန်း သေစေနိုင်တယ်ဆို လဲ မမှား တဲ့ ကြက်ဟင်းခါးသီ
ကြက်ဟင်းခါးသီး ပင်လေးဟာ အာရှတိုက်မှာဆိုရင် သာမန်အပင်လေး တစ်ပင်လောက်ပါပဲ။ ဂျပန်နိုင်ငံ ဝစ်ကီနာဝါက နှစ်ပေါင်းကြာရှည်အသက်ရှင်တဲ့ လူဦးရေတွေကြား အတော်လေး လူသိများပါတယ်။ ရေပါဝင်မှု ပမာဏ (၅%) ရာခိုင်နှုန်းသာရှိတဲ့ ကြက်ဟင်းခါးသီးရည်က အစာကြေမှုအတွက် အနှောက်အယှက်ပေးတဲ့ ကင်ဆာဆဲလ်တွေရဲ့ လမ်းကြောင်းလေးခုကို ဖျက်ဆီးပေးပါတယ်။ ကြက်ဟင်းခါးသီးကကင်ဆာဆဲလ်လမ်းကြောင်းနှစ်ခုရဲ့ ဆောင်ရွက်ချက်ကို ၉၀% ရာခိုင်နှုန်းလျော့ချပေးပြီး […]
သမီးကို တိုကျသတျသှားတဲ့ ကားကို ကိုယျတိုငျ စုံစမျးဖျောထုတျနိုငျခဲ့တဲ့ အဖေ
ကျောက်ဆည်မြို့မှ တံတားဦးမြို့သို့ သွားလာသည့် လမ်းပေါ်တွင် အသက်(၅၀)ခန့်ရှိမည့် အမျိုးသားကြီးတစ်ယောက် ဆိုင်ကယ်တစ်စီးဖြင့် သွားနေသည်။ ထိုအမျိုးသားကြီးသည် ကျောက်ဆည်–တံတားဦးလမ်းပေါ်ရှိ သင်ပုတ်ရွာလမ်းခွဲအနီးတွင်သာ ဆိုင်ကယ်ကို ခေါက်တုံ့ခေါက်ပြန်မောင်းနေခြင်းဖြစ်သည်။ ထိုသို့မောင်းနေရင်း ဖြတ်သွားဖြတ်လာကားများကို မျက်စိတစ်ဆုံး လိုက်လံကြည့်ရှုနေသည်။ အထူးသဖြင့် ဒိုင်နာကားမျိုးဆိုလျှင် အသေအချာ လိုက်ကြည့်သည်။ ဒိုင်နာကားများ၏ နောက်အဖုံးမှာ တစ်ခုခုများ ကပ်ထားမလား […]
လူကိုထိုင်ခိုင်းပြီးသူရှေ့မှာ အရင်းငွေနည်းနည်းလေးဖြစ်တဲ့ လိမ္မော်သီးများကို ရဲဒင်းနဲ့ထုချေလိုက်တဲ့ စည်ပင်
Account ထဲကမိတ်ဆွေတို့တခုလောက် အကူအညီပေးကြပါ။ ဒီနေ့ video file တခုတက်လာပါတယ်။မရှိလို့ လုပ်စားတဲ့ ဦးလေး အရွယ် ဘကြီး အရွယ်လူတယောက်ဈေးမှာ နေရာမတတ်နိုင်လို့ဗန်းလေး ၂ ခုထဲ လိမ္မော်သီးထည့်ရောင်းပါတယ်။ စည်းကမ်းနဲ့ မညီလို့စည်ပင်ကဖမ်းပါတယ်။အဲ့အထိလက်ခံပါတယ်။ပြစ်ဒဏ်ပေးတယ် ….နောက်တခါ […]
စွမ်းအားကြီးမားပြီး စိန်ခေါ်မှုတွေကို နှစ်သက်တဲ့ အင်္ဂါသား၊သမီးတွေဟာ အခက်အခဲတွေနဲ့တွေ့ရင် အရှုံးမပေးဘဲ ရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းနိုင်တဲ့သူ၊ မိသားစုအတွက် ရှေ့ကနေမားမားမတ်မတ်ကာကွယ်မယ့်သူတွေဖြစ်ပါတယ်။ အလုပ်အကိုင်၊ စီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်လာရင်လည်း ကောင်းကောင်းကိုင်တွယ်နိုင်ပြီး အောင်မြင်အောင်စွမ်းဆောင်နိုင်စွမ်းရှိကြတဲ့ အင်္ဂါ သား၊သမီးလေးတွေရဲ့ အချစ်ရေးနဲ့ပတ်သက်သမျှကိုဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်နော် ရင်ထဲက ခံစားချက်တွေကို လွယ်လွယ်နဲ့ဖွင့်ဟလေ့မရှိတာကြောင့် အချစ်ရေးမှာ အထီးကျန်တဲ့ခံစားချက်မျိုး အမြဲဖြစ်နေတတ်ပါတယ်။ ကိုယ်ချစ်တဲ့သူကို စကားလုံးတွေနဲ့ နာကျင်အောင်ပြောဆိုတတ်တဲ့ […]
အကယ်ဒမီများရှင် မင်းသမီးလေး ဝတ်မှုံရွှေရည်က သရုပ်ဆောင်ကောင်းပြီး ကျရာဇာတ်ရုပ်ကို တိတိကျကျ သရုပ်ဆောင်နိုင်တာကြောင့် ပရိသတ်တွေက ဆယ်စုနှစ်တစ်စုစာ အားပေးခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ အချင်းရော၊ အဆင်းပါပြည့်စုံသူလေး ဝတ်မှုံရွှေရည်က နောက်ပိုင်းမှာ ပြည်တွင်းမှာသာမက ပြည်ပနိုင်ငံတွေထိပါ ထိုးဖောက်အောင်မြင်တဲ့ အနုပညာရှင်တစ်ယောက်အဖြစ် နာမည်ကျော်ကြားသူတစ်ယောက်လည်း ဖြစ်ပါတယ်။ အနုပညာလုပ်ငန်းတွေ လက်မလည်အောင် လုပ်ကိုင်နေရတဲ့ မင်းသမီးလေး […]